Ihe nchịkọta nri | Nri & Nri | Foto ndị na-acha agba agba maka nbudata
Ihe nchịkọta nri na-akwado ụkọ ọnwụ
Uru nke ngwaahịa dị iche iche
Ụdị ihe mgbakwunye na-eri nri iji kwụsị ibu dị arọ. Ha nile na-ekwe nkwa na ha ga-enwe nnukwu ọnwụ ma ọ bụrụ na ha enweghi agụụ n'oge obere oge. Ihe a niile na-enweghị atụmatụ nri dị oke mma na ọbụna na-enweghị mmega ahụ. Ma olee ihe dị mkpa maka ọtụtụ ihe ndị na-efu ọnwụ? Debe nkwa gị ma ọ bụ gosipụta onwe gị ọbụna dị ka adịghị mma?
Ndị a bụ ụdị ọrụ ndị kachasị ewu ewu
das Inye ihe mgbakwunye nriNa nkwa a ngwa ngwa na-adigide arọ ọnwụ bụ riesig.- protein emee ka anya doo, na-akpọ Formula diets bụ ala kalori na enriched na mkpa nri protein ntụ ntụ.
Nri nri na ihe oriri
Detoxifiers ga dehydrate ahụ ifelata verlieren.- abụba blockers, abụba burners nwekwara gbochie imegharị ihe maka iji nke ọnọ site na nri Fette.- Kohlehydratblocker inhibit Verdauungsenzym.- chọrọ maka carbohydrate-gbawara
Agụụ suppressants belata site Efrata dị ka caffeine, guarana ma ọ bụ nwunye extracts na Hungergefühl.- Superfood smoothies nkwa arọ ọnwụ na-enweghị ghara ibu ibu; ha ike na ihe ọ bụla ikpe.
A na-ekwu ngwaahịa ndị a niile iji nyere gị aka idalata ma nwee ahụike ma dabara n'ime oge dị mkpirikpi.
Onye ọ bụla na-emepụta ihe oriri ndị a na-ekwu na nkwenkwe siri ike na ngwaahịa ha na-eduga n'ịdị arọ na adịgide adịgide nke ịdị arọ ahụ. Na niile na-enweghị Mgbanwe nke nri ma ọ bụ mmega ahụ.
Akụkụ nke ahụmịhe bara uru bụ nke kwekọrọ ná nkwa ndị a. Ka o sina dị, a ga-ewere oke mmụba ahụ na enyemaka nke ihe mgbakwunye nri dị ka ihe dị mkpa. N'ihi na ndepụta nke ọghọm dị ma ọ dịkarịa ala ma ọ bụrụhaala uru.
Otu n'ime ihe nchịkọta kachasị mma bụ ụdị nri ahụ, ebe a na-ejikọta ntụ ntụ na / ma ọ bụ nri na-esi nri na mmiri iji mee ka a maa jijiji. Ngwa ndị a pụrụ iche na-enwe ike ịnọgide na-eri nri nke ọsọ ọsọ ọsọ.
Nhọrọ ọzọ maka ndị ahụike ahụike bụ ndị na-ebelata agụụ nke na-egbochi mmetụta nke agụụ. Karịsịa mgbe ị na-esi nri dị ka calorie dị elu na-eri nri dị mma, mkpụrụ ọgwụ ndị a ga-enye aka maka obere oge. Ọnwụ dị arọ na nke a na-esite n'inweta oriri calorie dị ntakịrị n'ime ihe ndị na-adịghị edozi ahụ.
Na-akpọ abụba na Kohlehydratblockern e dị ka Stiftung Warentest No ọmụmụ neziputa Effekte.Kein nri pụtara enweghị NachteileKohlehydratblocker nwere ike ịbụ ihe na-akpata afọ ọsịsa na flatulence mgbe na-ewere abụba blockers nwere ike ime ka oké njọ mmetụta dị otú ahụ dị ka Nsị incontinence, afo cramps ma ọ bụ vitamin erughi.
N'otu oge ahụ, ha na-emetụta mmetụta nke ọgwụ ndị dị ka ọgwụ mgbochi nwa.
Ma dietary Mmeju nwere na mgbakwunye na nke yo-yo mmetụta n'ihu Nachteile.- Ogologo oge eji protein emee ka anya doo: ọbara nsogbu, afọ ntachi, nsogbu na Elektrolythaushalt.- Detoxifiers: oké uric acid etoju, ala ọbara sugar, Kaliummangel.- agụụ: iche iche ihe ize ndụ ndị mmadụ na ọrịa obi na ọrịa ma ọ bụ ọbara mgbali elu.
a pụtara na dietary Mmeju dị ka protein emee ka anya doo ma ọ bụ agụụ suppressants eme a ọma aka n'ihi na a obere oge ma na-akwali. All ndị ọzọ na ngwaahịa na-na na dabere na-atụ aro
Ịghara ibu arọ n'enweghị agụụ, na-enweghị nri na obi ụtọ
Nri - Ntak ihe n 'ugbo ala mere ka i buru ibu
Nri - obere calorie na-aṅụ ihe ọzọ